ecology - Synonyms of ecology | Antonyms of ecology | Definition of ecology | Example of ecology | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for ecology
Top 30 analogous words or synonyms for ecology
လက်ပံတောင်းတောင်အစီရင်ခံစာ (က)Ecology Expert
ဇီဝဗေဒ ၏ မရှိမဖြစ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာပြီး ဂေဟဗေဒ(Ecology)ကဲ့သို့သောဘာသာရပ်ခွဲမှ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုပြသနာ
ပထဝီဝင် ပထဝီဝင်ဘာသာရပ်သည် သဘာဝသိပ္ပံ ဘာသာရပ် (Ecology)၊ နှင့် လေ့လာမှုနယ်ပယ် တူညီမှုများ ရှိသော်လည်း မတူ ကွဲပြားခြားနားသည်။
ဂေဟဗေဒ "Ecology" ဆိုသည့် ဝေါဟာရကို နှုတ်ပြောစကားအနေဖြင့် ၊ စသည်တို့တွင် ထည့်သွင်းသုံးနှုန်းကြသကဲ့သို့ သဘာဝဝန်းကျင် သို့မဟုတ် သဘာဝဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝါဒ ဟူသောစကားလုံးများ၏ အဓိပ္ပာယ်တူ ဝေါဟာရအဖြစ် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ဂေဟဗေဒ ဂေဟဗေဒ (ဂရိဘာသာ oîkos, "ဂေဟာ"; -λογία, -logia, ဘာသာဗေဒ၊ အင်္ဂလိပ် - ecology) သည် သက်ရှိများ ဖြန့်ကျက်တည်ရှိပုံ၊ ဦးရေနှင့် သက်ရှိ အော်ဂင်နစ်ဆင်များနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်အကြား မည်သို့ အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှု ရှိသည်ကို လေ့လာသည့် သိပ္ပံပညာတရပ်ဖြစ်သည်။ သက်ရှိ အော်ဂင်နစ်ဆင်၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရုပ်သတ္တိများ ပါဝင်သည်။ ယင်းသတ္တများတွင် အဇီဝအချက်များဖြစ်သည့် နေရောင်ခြည်၊ ရာသီဥတု၊ ဘူမိအနေအထားနှင့် ဇီဝအချက်များဖြစ်သည့် ယင်းသက်ရှိများနှင့်အတူ ကျက်စားနေထိုင်ကြသည့် အခြားသက်ရှိများ ပါဝင်သည်။
ဂေဟဗေဒ Ecology သို့မဟုတ် "oekologie" ဟူသော ဝေါဟာရကို ဂျာမန် ဇီဝဗေဒပညာရှင် က ၁၈၆၆ ခုနှစ်တွင် တီထွင်ခဲ့ပြီး "အော်ဂင်နစ်ဆင်နှင့် ယင်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်အကြား ဆက်နွှယ်မှုအား လေ့လာသည့် သိပ္ပံပညာရပ်"ဟု အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ Haeckel သည် ဤသဘောတရားကို အသေးစိတ် ဆက်လက် ပြုစုခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ပထမဦးဆုံးသော ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကို (တက္ကသိုလ်တွင် ပထမဦးဆုံးသော သင်တန်းနှင့်အတူ) ဒိန်းမတ် ရုက္ခဗေဒပညာရှင် က ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းစောစောပိုင်း စာအုပ်ကြောင့် Warming အား ဂေဟဗေဒပညာရပ်အား ထူထောင်ခဲ့သူဟု နောင်လာနောက်သားများက အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
ပေါင်လို ဂျင့်ထိလွန်းနီ မာရီယို ခပဲနာ ဦးဆောင်သည့် အစွန်းရောက် လက်ဝဲယိမ်း လူငယ်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သော ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု၏ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ခပဲနာက ပစ္စည်းမဲ့(လူတန်းစား)ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(Proletarian Democracy Party)ကို တည်​ထောင်လိုက်သည့်အခါ မလိုက်ပါတော့ဘဲ ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအတွက် အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်လေသည်။ ထိုနှစ်များအတွင်း ဂျင့်ထိလွန်းနီသည် လယ်ဂံဘီယင့်တီ၏ တရားဝင်သတင်းစာ ဖြစ်သော လာ နျိုဗာ အီကိုလိုဂျီယာ("The New Ecology")၏ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်အောင် သူ့ကို ကူညီပေးသော ချစ်ကို တက်စတာ၏ ခင်မင်ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်း ဖြစ်လာသည်။ ဤသတင်းစာ၏ ဒါရိုက်တာ တယောက်အဖြစ်ဖြင့် သူသည် ဂရင်းဖယ်ဒရေးရှင်း၏လူငယ်ခေါင်းဆောင် ဖရန့်စဲစကို ရုထယ်လီနှင့် တွေ့ခဲ့သည်။
ရှိန်းကျိန့်မြို့ The plans were originally detailed by the Hong Kong non-governmental think tank, Bauhinia Research Foundation in August 2007, and covered such matters as financial services, hi-tech and high-end research and development, transport, environmental matters and ecology. It was claimed that Shenzhen-Hong Kong could be the third largest metropolis in the world in GDP terms by 2020, only behind New York City and Tokyo. The plan was also endorsed by the China Development Institute,aShenzhen-based non-government think tank.
ကျား An analysis of craniodental and pelage [[morphology (biology)|morphology]], ecology, and [[molecular biology]] of the tiger subspecies indicates that they have many traits in common and that the [[genetic diversity]] between them is low. The authors of this analysis suggest to group the Bengal, Indochinese, Malayan, South China, and Siberian tiger subspecies to the Continental tiger "Panthera tigris tigris"; and the Sumatran, Javan and Bali tiger subspecies to the Sunda tiger "Panthera tigris sondaica". This classification is intended to facilitate tiger conservation management, both regarding breeding programmes in zoos and future translocations in the wild. The classification is criticised by several [[geneticist]]s, who maintain that the currently recognised nine subspecies can be distinguished genetically.